ALAKAMISY 21 JANOARY 2021
RANDRIAMANANTSOA TABERA : « Fandaniam-bolam-panjakana fotsiny ny FFM vaovao »
« Tsy hitondra mankany amin’ny fampihavanam-pirenenena velively ny Filankevitry ny Fampihavanana Malagasy (FFM) amin’ny endriny vaovao. Mitovy amin’ny FFM teo aloha io ary fandaniam-bolam-panjakana fotsiny ». 10 août 2017
Izay no nambaran’ny minisitry ny Asam-panjakana sy asa sosialy teo aloha Tabera Randriamanantsoa rehefa nanontaniana ny heviny mikasika ity rafitry ity. Ho an’i Tabera Randriamanantsoa « fahamarinana sy fampihavanana tena izy (vérité et réconciliation) no ilain’ny firenena sy ny vahoaka malagasy fa tsy fampihavanana ny mpanao politika tahaka an- dRavalomanana sy ny sasany. Izany hoe tsy tokony hisy ny tsy matimanota ».
« Manana tantara ary manana ny maha izy azy ny faritra tsirairay eto Madagasikara izay tsy azo kosehina. Mitaky fiovana manomboka eny ifotony na « refondation » ny fampihavanam-pirenena. Amin’ny fomba ahoana no hisian’ny fampihavanam-pirenena raha tsy mbola manana fahafahana ny hitsabo tena ohatra ny ankamaroan’ny tokantrano malagasy ? Ohatra iray anatiny maro izany », hoy hatrany Tabera Randriamanantsoa. Na izany na tsy izany tsy vitsy ireo mpanara-baovao maneho ny ahiahiny mikasika ny FFM vaovao.
« Tsy hitondra zava-baovao eto amin’ny firenena izany ny FFM raha mbola afenina ny marina eo amin’ny lafiny politika, sosialy, ekonomika, sns. Tsy fampihavanana ireo mpitondra nifandimby teo aloha sy ankehitriny no ilain’ny malagasy fa fampandrosoana mirindra any amin’ireo faritra rehetra misy eto amin’ny firenena », hoy ny fanazavana nomen’ny raiamadreny iray any Antsiranana.
Tratra niaraka tamin’ny basy sy odigasy i Alain, jiolahy raindahiny ANKAZOBE (664) 21 janvier 2021 Mila vola hatrany amin’ny 75,9 tapitrisa dolara KERE SY HAINTANY ANY ATSIMO (356) 19 janvier 2021 Nakorain’ireo mpijery ny Ben’ny tanànan’Antsiranana FANDRAVANA LALAO (158) 19 janvier 2021 Trano 50 tafo mahery kilan’ny afo HAIN-TRANO GOAVANA TENY ANOSIBE ANDREFANA (89) 19 janvier 2021 Namaly ny hetahetan’ireo voafonja ao Antsiranana DEPIOTE JOCELYNE MAXIME (76) 19 janvier 2021 Lehilahy 04 mpihaza sokatra an-dranomasina tratra NOSY ANTANIFALY - ANALALAVA (72) 19 janvier 2021